Onye nwere nsogbu na ahia akpaaka | Martech Zone
Mgbe m dere na nso nso a banyere gara aga, ugbu a na ọdịnihu nke ahịa, otu ebe a na-elekwasị anya bụ ịzụ ahịa akpaaka. Ekwuru m banyere otu ụlọ ọrụ ahụ si kewaa n'ezie.
Enwere azịza ndị nwere obere njedebe nke chọrọ ka ị dakọtara na usoro ha iji nwee ọganiihu. Ndị a adịghị ọnụ… ọtụtụ na-efu ọtụtụ puku dollar kwa ọnwa na isi na-achọ ka ị na-retool otú gị ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ iji kwekọọ ha ụkpụrụ. Ekwenyere m na nke a na-eweta ọdachi maka ọtụtụ ụlọ ọrụ… ndị na-aga nke ọma n'ihi na usoro ha nwere rụrụ ọrụ nke ọma.
Ihe ngwọta dị elu na-enye ụda mgbanwe na nhazi, mana mmejuputa ahụ bụ obi ọjọọ. N'oge ụfọdụ, ọ na-achọ ọtụtụ ọnwa nke ọrụ na ọbụlagodi mmemme na njikwa ihe. Anyị na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị nyere ikikere na-arụ ọrụ akụrụngwa ahịa azịza, ma enwebeghị ike imejuputa na itinye n'ọrụ teknụzụ ahụ. Ya mere,… ha na-akwụ ụgwọ buru ibu, ma ọ dịghị mgbe ịmara ikike nwere.
Right Na mmekọrịta na-akpaghasị ahịa (ọzọ). Enweelarị aha nri na mmekọrịta mmekọrịta na ụlọ ọrụ na-ere ahịa akpaaka nke Gleanster dere - jiri ntinye kachasị na ntinye dị mfe. Ugbu a, ha na-agbanwe ụzọ ụlọ ọrụ ga-esi were usoro azụmaahịa ndụ.
Right Na mmekọrịta ugbu a na-enye ụlọ ọrụ ohere ịbanye na ahịa akpaaka ahịa na ọkwa ọ bụla nke ọkaibe ha. Ọ bụrụ na ha enweghị atụmatụ, ha nwere ike ịmalite site na isi ngwugwu. Y’oburu na ha amatachala ahia ahia email ma dikwa njikere maka ahia na ntanye, ha nwere ike imeghari ma obu bido akpaaka. Ma ọ bụrụ na ha dị njikere ịkwado ikpo okwu ahụ, ha nwere ike ịga ma ọ bụ bido okirikiri ndụ ahịa
Nke a bụ mmebi nke Right Na mmekọrịta nchịkọta:
Basic - Email, Mpempe akwụkwọ ọdịda na Ngwá Ọrụ ,dị, Nkwupụta Email na ckingchọpụta, Nrụpụta Nkeji, Nchịkọta Weebụ, Nkwupụta Onye Ọbịa Na-amaghị, Akụkọ Ọbịbịa Onye Amatara na Akuko Nduzi Na-ekpo ọkụ.
Automation - Na mgbakwunye na Basic, gbakwunye nchịkọta mmekọrịta na mkpesa, Mmemme Ahịa akpaaka, Nkwupụta Mmemme Ahịa, Nzipụta na CRM na Onye Nlekọta Ndị Ahịa nke Onye Ọrụ.
Ndụ ndụ - Na mgbakwunye na atụmatụ niile nke Basic na Automation, Lifecycle Marketing, Lifecycle Staging na Gate Criteria, na 3D Scoring.
Nke kachasị mma, ngwugwu bụ isi dị oke ọnụ karịa ndị na-ere ahịa otu ụlọ ọrụ. Enweghị mkpa ịkwaga site na otu onye na-ere ahịa gaa na onye ọzọ - na-ahapụ ọgụgụ isi ndị ahịa na-arụ ọrụ. Iji ikike na mmekọrịta mmekọrịta data niile adịlarịrị ebe ahụ, naanị ha na-enyere atụmatụ ndị ọzọ aka ka ị na-aga ngwugwu na-esote.
Nke a bụ nkọwa nke otu esi Right Na mmekọrịta iche
ngosi: Right Na mmekọrịta bụ onye nkwado nke Martech Zone, ha bụ ndị ahịa nke DK New Media (anyị mepụtara vidiyo ahụ), anyị bụ ndị ahịa nke ha!
Tags: Ntinye 3dCRMahịa ahịa ndụemail Marketingozi emailozi ịntanetịụdị ngwá ọrụformsna-ekpo ọkụ na-edugaọdịda pageNdụ ahịa ndụusoro ndụnri na mmekọrịtaROIndị ahịankenkewanchịkọta mmadụịkọ akụkọ ndị ọbịaweb analytics